Iyo Apple Watch inogona kunge iri dhizaini yekugadzira yeanotevera Apple zvigadzirwa | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch inogona kunge iri dhizaini yekugadzira yeanotevera Apple zvigadzirwa
Sezvo iwe ungatoziva kare, kubva kuSoy de Mac isu tinotarisa paApple brand makomputa uye zvishandiso senge Apple Watch, Apple TV kana AirPods, zvisinei nhasi tinofanirwa kuvhara nhau dzine chekuita neApple Watch uye inofungidzirwa inotevera vhezheni ye iPhone.
Apple inofanirwa kugadzira kana zvasvika kune iyo iPhone uye ndeipi sarudzo iri nani pane kutora dhizaini yeiyo iPhone sereferenzi. Dhizaini yeApple Watch Iyo yakagara ichirumbidzwa uye ma curves ayo, kunyangwe ari akaenzana emakona, anotapa.
Iyo Apple Watch yakagadzirwa mualuminium, mune simbi uye nhema simbi pamwe nemhando mbiri dzegoridhe uye pakupedzisira, yazvino vhezheni mune zvedongo zvinhu. Idzi shanduko muzvinhu pamwe chete neakasiyana mapedzero akaedzwa muyekupedzisira iPhone yakapihwa inogona kutipa chiratidzo chekuti izvo Apple zvaizove chaizvo kuita iri kuyedza zvikamu zvakasiyana zve dhizaini iyo yatinozoona pakupedzisira yegumi yegumi iPhone.
El japanese blog Macotakara yaburitsa nhasi kuti avo veCupertino vakakwanisa kutora sereferenzi kune yavo inotevera iPhone iyo Apple Tarisa musimbi uye ndeyekuti inguva yekuti iyo iPhone ive nemuviri wesimbi senge iyo iPhone 4. Neichi isu tingave takatarisana neyekutanga nguva iyo Apple yaive kuyedza zvimwe zvinhu zvekugadzira uye zvigadzirwa muchigadzirwa uye wozoendesa kune imwe yakadai seiyo iPhone.
Ndiani anotiudza kuti isu hatizokwanisa kuona yegumi yegumi gore iPhone mune zvedongo zvinhu? Ichokwadi here iyo pfungwa yeApple Watch skrini iyo yatichava nayo mune inotevera iPhone? Dzakawanda dzinogona kuve mhinduro dzemibvunzo miviri iyi uye nekudaro isu tichave tinoteerera kune chero chinhu chatinga zive nezvekushandiswa kweApple Watch fomu kukuzivisa iwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Iyo Apple Watch inogona kunge iri dhizaini yekugadzira yeanotevera Apple zvigadzirwa
Steve Wozniak akajeka, Apple ichakura zvakanyanya zvakanyanya
New iMac yekunonoka 2017 neXeon E3 processor uye 64 GB ye RAM